मेसीबिनाको विश्वकप ? - खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
मेसीबिनाको विश्वकप ?
- एएफपी, मोन्टेभिडियो
आश्विन २४, २०७४-सोच्दै नसोचिएको तथ्य, लियोनल मेसी र अर्जेन्टिनाबिनाको विश्वकप मंगलबार सम्भव हुन सक्नेछ, जति बेला सन् २०१८ को दक्षिण अमेरिकी विश्वकप छनोट अन्त्यमा पुग्नेछ । दुई वर्षअगाडि छनोटको पहिलो खेलमा अर्जेन्टिना घरमै इक्वेडरको हातबाट २–० ले पराजित भएको थियो । यसपल्ट जर्गे साम्पाओलीको टिम अन्तिम खेलका लागि इक्वेडर भ्रमणमा निस्कँदै छ ।
खेल हुनेछ, क्विटोमा ।
यहाँ अर्जेन्टिनाको सम्भावना जटिल मोडमा छ । दुईपल्टको विश्वकप विजेता छैटौं स्थानमा छ । यो स्वत: विश्वकपमा प्रवेश पाउने शीर्ष चारको स्थानभन्दा बाहिर छ । पाँचौंमा पेरु छ र यो स्थानमा रहने टिमले प्लेअफ खेल्नेछ । अर्जेन्टिना र पेरुबीच गोल अन्तरमात्र फरक छ ।
तेस्रो स्थानको चिली (२६) र सातौंमा रहेको पाराग्वे (२४ अंक) बीच २ अंकको मात्र अन्तर रहेको हुनाले सबै खाले सम्भावना पनि खुला छ । अर्जेन्टिना अन्तिम खेलमा विजयी रहे कम्तीमा पाँचौं स्थानमा रहनेछ । यस्तो स्थितिमा प्लेअफमा उसले न्युजिल्यान्डको सामना गर्नेछ र त्यसमा जितको अपेक्षा राख्न सकिनेछ ।
क्विटो समुद्री सतहबाट २ हजार ८ सय ५० मिनेट माथि छ । यहाँ खेल्नु निकै कठिन मानिन्छ । इक्वेडरविरुद्ध अर्जेन्टिनाको पछिल्लो प्रदर्शन पनि राम्रो छैन, उसले अन्तिम पटक सन् २००१ मा जित निकालेको थियो । त्यस बाहेक अर्जेन्टिनाले सबै खेल सकिएको क्षण पनि कुर्नुपर्नेछ, किनभने ती सबै एकअर्कामा सम्बन्धित छन् । सबैखाले सम्भावना जीवन्त छ ।
इजिप्ट २८ वर्षपछि छनोट ›